ko htike's prosaic collection: ကောင်းမွန်သော အုပ်ချုပ်မှုစနစ်နဲ့ သန့်ရှင်းသော အစိုးရ ပေါ်ပေါက် လာရေး
ကောင်းမွန်သော အုပ်ချုပ်မှုစနစ်နဲ့ သန့်ရှင်းသော အစိုးရ ပေါ်ပေါက် လာရေး
မြန်မာပြည်မှာ ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ အစိုးရသစ်ရဲ့ သမ္မတပြောလိုက်တဲ့ မိန့်ခွန်းက ခုတလော လူပြောများလာပါတယ်။
"အစုိုးရသစ်ရဲ့ အရေးကြီးဆုံး လုပ်ငန်းစဉ်ကတော့ ကောင်းမွန်သော အုပ်ချုပ်မှုစနစ်နဲ့ သန့်ရှင်းသော အစိုးရ ပေါ်ပေါက် လာအောင် လုပ်ဆောင်ဖို့ ဖြစ်ကြောင်း၊ အဲဒီလို ဖြစ်နိုင်ဖို့အတွက် အစိုးရ လုပ်ငန်းများဟာ ပွင့်လင်းမှု ရှိရမယ်၊ တာဝန်ခံမှု ရှိရမယ်၊ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ၊ တည်ဆဲ ဥပဒေများနဲ့ ကိုက်ညီရမယ်၊ ပြည်သူ့ဆန္ဒနဲ့ ကိုက်ညီပြီး အားလုံး ပါဝင်နိုင်မှု ရှိရမယ်၊ လုပ်ငန်းများဟာ သွက်လက်ပြီး ထိရောက်မှု ရှိရမယ်။" (သမ္မတ ဦးစိန်းစိန်)
ဦးသိန်းစိန် ပြောတာတွေကလည်း ပြောတာပေါ့။ တကယ်တန်း အဲဒီလို ပြောတာတွေဖြစ်တဲ့ ."ကောင်းမွန်သော အုပ်ချုပ်မှုစနစ်နဲ့ သန့်ရှင်းသော အစိုးရ ပေါ်ပေါက် လာအောင် လုပ်ဆောင်ဖို့" ဆိုတာတွေအတွက် သမ္မတရာထူးယူထားတဲ့ လူက ပြောတိုင်း ဖြစ်လာတဲ့ အရာမဟုတ်ဘူးဆိုတာ ပြောတဲ့သူကိုယ်တိုင် သိဖို့ကောင်းတယ်။ အဲလို အစိုးရဖြစ်လာဖို့ဆိုရင် "ပါလီမာန်(ဥပဒေပြု အာဏာ)၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်း(အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာ)၊ တရားရေးဌာန(တရားစီရင်ရေး)" အဲဒီ ၃ ရပ်လုံးသီးခြားစီ လုပ်ကိုင်နိုင်ဖို့ ရေးဆွဲထားတဲ့ အခြေခံဥပဒေ တိုင်းပြည်မှာ ရှိဖို့လိုတယ်။ ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်ရဲ့ ၂၀၀၈ နာဂစ် အခြေခံဥပဒေမှာ အဲဒီအချက်တွေနဲ့ ပြည့်စုံပါရဲ့လားဆိုတာ .. မိန်ခွန်းပြောတဲ့ သမ္မတက သေချာ ဆန်းစစ်ရဲ့လားဆိုတဲ့ သံသယ ဖြစ်မိပါတယ်။
ပထမ တချက်အနေနဲ့ အားကောင်းတဲ့ အတိုက်အခံမရှိအောင် ရွေးကောက်ပွဲမှာ အစီအစဉ်တကျ နည်းမျိုးစုံနဲ့ တားမြစ်ထားတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကနေ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ပါလီမာန် (ဥပဒေပြု အာဏာ)ကနေ အတည်ပြုလာမယ့် ဥပဒေတွေဟာ "တရားမျှတပါရဲ့လား၊ သန့်ရှင်းပါရဲ့လား၊ လူတစ်စုကိုပဲ ကိုယ်စားပြုတဲ့ ဘက်လိုက်မှုဆိုတာတွေ ကင်းနိုင်ရဲ့လား၊ ပြည်သူ့ကောင်းကျိုးကို ဖြစ်ပေါ်လာစေမှာလား" ဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေကို ဦးသိန်းစိန် အရင်ဖြေသင့်ပါတယ်။
ဒုတိယ အချက်အနေနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲမှာ နည်းမျိုးစုံနဲ့ အနိုင်ယူထားပြီး ရလဒ်အဖြစ် ပေါ်ထွက်လာတဲ့ သမ္မတက နိုင်ငံရဲ့ "တရားစီရင်ရေးအာဏာ" ရှိမယ့် တရားသူကြီးချုပ်ကို တိုက်ရိုက်ရွေးချယ် ခန့်ထားနိုင်ခွင့်ရှိသလို၊ အချိန်မရွေးလည်း ရာထူးကနေ ထုတ်ပယ်ပိုင်ခွင့်ရှိနေပါတယ်။ ဒီအချက်ဟာ တိုင်းပြည်အတွက် အန္တရာယ်အင်မတန်ကြီးတဲ့ အချက်ဖြစ်သလို သန့်ရှင်းတဲ့ အစိုးရဖြစ်ပေါ်လာဖို့အတွက် အဓိက တားဆီးနေတဲ့ အချက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ မိန့်ခွန်းမပြောခင် သမ္မတအနေနဲ့ သေသေချာချာ စဉ်းစားသင့်တယ်ထင်ပါတယ်။ (ဥပမာ အစိုးရ အဖွဲ့အစည်း (ဒါမှမဟုတ်) သမ္မတက ဥပဒေ ချိုးဖေါက်တာလုပ်ရင် တရားသူကြီးချုပ်က အရေးယူလို့ မရတော့ပါဘူး။) ဘာလို့လဲဆိုတော့ အဲဒီ တရားသူကြီးချုပ်ကို သမ္မတက အချိန်မရွေး ဖြုတ်လို့ ရနေလို့ပါပဲ။ .. သမ္မတရဲ့ ဥပဒေ ချိုးဖောက်မှုတွကို အရေးမယူမယ့် တရားသူကြီးချုပ်ကိုပဲ ရွေးချယ်ခန့်မှာ ဖြစ်နေလို့ပါပဲ။ တရာစီရင်ရေးနဲ့ ဥပဒေရေးဆွဲရေးလုပ်ရာမှာလည်း တရားသူကြီးချုပ်က သမ္မတ မျက်နှာကို ကြည့်ပြီး လုပ်ရမှာ ဖြစ်တာကြောင့် .. သမ္မတနဲ့ အစိုးရအဖွဲ့ကို မထိခိုက်မယ့် ဥပဒေတွေကို ရေးဆွဲပါတော့မယ်။ ဒီအခါ တိုင်းပြည်ဟာ ပြည်သူလူထုကို အန္တရယ်ပေးမယ့် "state terrorism" ဖြစ်လာပါတော့မယ်။ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းကို အရေးယူလို့ရမယ့် တရားစီရင်ရေး စနစ် မရှိတာကြောင့် သန့်ရှင်းတဲ့ အစိုးရဖြစ်လာစရာ လမ်းမရှိပါဘူး။ ဒါကြောင့် လက်ရှိ အခြေခံဥပဒေအရ ကောင်းမွန်တဲ့ အုပ်ချုပ်ရေး စနစ် ပေါ်ပေါက်လာရေး ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို ပြောနိုင်ဖို့ ဦးသိန်းစိန်က ဘယ်လို အချက်မျိုးနဲ့ ထောက်ပံ့ပြောဆိုနေလဲ ဆိုတာမေးဖို့ လိုလာပါတယ်။
အုပ်ချုပ်ရေး အာဏာ အပိုင်းမှာလည်း ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ အခြေခံဥပဒေအရ အားနည်းချက်တွေ အများကြီး ရှိနေပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှ ထပ်မံ ဆွေးနွေးပါ့မယ့်။
Posted by ကိုထိုက် at 12:10
Kyaw Zin said...
ရေးစွဲထားတဲ့ = ရေးဆွဲထားတဲ့။
တားစီးနေတဲ့ = တားဆီးနေတဲ့
12 April 2011 at 05:00
ကိုကျော်ဇင်၊ ကျေးဇူးပါပဲ။ အခုလို စာလုံးပေါင်း မှားနေတာကို ထောက်ပြတာ။
12 April 2011 at 08:02
တကယ်တန်း - တကယ်တမ်း
ပါလီမာန် (အားမာန်) - ပါလီမန်
ပြည်တွင်းစစ် အနှစ်၆၀ ကျော်ခဲ့ပါပီ... ဒါပေမယ့် စောက်ကျဉ်း ဗိုလ်ချုပ်တွေ လက်ထက်ရောက်မှ မြန်မာတွေသန်းနဲ့ချီ(တရားဝင်/တရားမဝင်) ပြည်ပ ထွက်ပြေးနေကြရတာ ဗမာဗိုလ်ချုပ်တွေ ဘယ်လောက်ကျဉ်းသလဲ ဆိုတဲ့ သက်သေပဲ ..။
ဗမာစိတ်ရှိတယ် ဆိုပြီး တစ်စါစါ အော်နေတဲ့ စေါက်ကျဉ်း ဗမာဗိုလ်ချုပ်ကြီးများ ရဲ. ဗမာအခြင်းခြင်း မတရား အဆင့်အတန်းခွဲမှု ကိုယ့်ဗမာလူမျိုးကိုယ် ကျွန်လို သဘောထားတဲ့ စိတ်ဓါတ် ကို နေရာတကာမှာတွေ.ရတယ်...ဥပမာ။
(၁) စေါက်ကျဉ်း အုပ်ချုပ်မှု အာဏာ....
မြန်မာပြည်မှာ စေါက်ကျဉ်းဗိုလ်ချုပ်တွေ က လွဲရင် ဘယ်သူမှ ဌာနဆိုင်ရာ ဝန်ကြီး ညွှန်ချုပ် ညွှန်မှူး ရာထူး ယူခွင့်မရှိတာ အနှစ်၄၀ကျော်။
(၂)စေါက်ကျဉ်း စည်းပွားရေးအခွင့်ထူး ခံ....
စေါက်ကျဉ်းဗိုလ်ချုပ် မိသားစုများ နဲ.မိတ်ဆွေတွေ ကလွဲရင် အကြီးကျယ်ဆုံး အမြတ်အစွန်း ရမယ့် မြန်မာ့စည်းပွားရေး ဂွင် မှန်သမျ အားလုံးကို ဘယ်မြန်မာပြည်သား မှ လုပ်ကိုင်ခွင့်မရှိ။
(၃) စေါက်ကျဉ်းများအာဏာရရေး လူမျိုးတစ်မျိုးလုံးရဲ. ဘဝတွေနဲ. လဲလှယ်..........
" မြန်မာ့စေါက်ကျဉ်းဗိုလ်ချုပ် များရဲ. အစိုးရနေရာက မဆင်းရရင်ပြီးရော" ဆိုတဲ့ စေါက်ကျဉ်းအမြင် တစ်ခုထဲနဲ. မျက်မွှေးတဆုံး ကြည့်မှုကြောင့်....
မြန်မာ့အဖိုးတန် ရတနာ ဓါတ်ငွေ. ၊ သယံဇာတ အမျိုးမျိုး။ မြစ်ချောင်းကြီးအသွယ်သွယ်၊ ရွှေသစ်တောကြီးများ နဲ. ..... (၇၀%သော) မြန်မာများရဲ့အသက်သွေးကြော လယ်ယာကိုင်းကျွန်း မြေများကိုပင်..
(ယန်တယားကြီးလို ကြောက်ခမမ်းလိလိ ဝါးမြိုနေတဲ့) ဗီတိုအာဏာရ တရုတ်ကြီးလက်ထဲ အနှစ်၃၀ ထိုးအပ်လိုက်တော့.... ၇၀%သော ဗမာလယ်သမား အများစု ပြည်တွင်းမှာ စိုက်ပျိုးမစါးနိုင်တော့ဘူး ... စစ်ဗိုလ်ချုပ်စေါက်ကျဉ်းတွေက လယ်သမားဘိုးဘွားပိုင်မြေတွေကို မတရားသိမ်းယူပီး တရုတ်ကိုရောင်းစါး နေတာ နေ.တိုင်း ... ဒါကြောင့် အိမ်နီးခြင်းနိုင်ငံတွေမှာ မျက်နှာငယ် နဲ. ဗမာတွေ ကျွန်ခံကြရပီ။ ဗမာအိမ်စေဆိုတာ စေါက်ကျဉ်း ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေလက်ထက်ရောက်မှ ပြည်ပမှာပေါ်လာတာပါ။
"စစ်တပ်မှစစ်တပ် ၊ စစ်ဗိုလ်မှလူထင်တဲ့ ရာထူးရသင့်တယ်ထင်တဲ့ စေါက်ကျဉ်းဗိုလ်ချုပ်" တွေ မြန်မာပြည် ကို နှစ်၅၀ အုပ်ချုပ် ဖျက်ဆီးပစ် လိုက်တာ အာရှမှာ ဆန်စပါးအများဆုံး ရောင်းချတင်ပို.နိုင်ခဲ့တဲ့ အပြည်.စုံဆုံး လူမျိုးဘ၀ကနေ အစုတ်ပြတ် အမွဲတေဆုံး လူမျိုးဖြစ်သွားပီ။ လက်တွေ.ပဲ။
စစ်ဗိုလ်စေါက်ကျဉ်းတွေ များ "ဘယ်လောက် ကျဉ်းသလဲ ဆို" ဘာမဟုတ်တဲ့ အသေးအဖွဲကိစ်စ မော်တော်ကားမှန် အနက်ရောင် စတစ်ကာတောင် မှ ဗမာလူမျိုး သာမန် သက်ကြီးရွယ်အိုတွေ ခလေးပေါက်စ နဲ့ ကျန်းမာရေးချို.တဲ့သူတွေ အကျိုးအတွက် သုံးခွင့်မပေးပဲ သူတို. စေါက်ကျဉ်းဗိုလ်ချုပ်မိသားစုတွေ စီးတဲ့ကားတွေ မှာသာ ကပ်ခွင့်ရှိတာ ကြည့်တော့။ ဘယ်တိုင်းပြည်မှာ ကြားဘူးကြုံဘူး ကြသလဲ။
30 May 2011 at 11:15
i don't know where u stay ko htike, and had u read united state of America(USA) constitution? Because in USA constitution, the president appointed all judge and senate approve it. after that no one can remove them until they die. that is call life tenure. Myanmar constitution is nearly the same as America constitution except the judge can stay maximum of 20 years in justice. we hope that u can write more specific about Myanmar constitution so we can learn from u. other wise that is useless.
6 July 2011 at 17:38
အစိုးရက ဆင်းကဒ်တွေရောင်းဖို.ပြင်နေတယ် ၊
ဆင်းကဒ်တွေရောင်းရင် နိုင်ငံတကာ Price နဲ.ဘဲရောင်းပေး
ပါ ၊အဆင်.ဆင်. တစ်ထစ်ချင်း ပါးပါးလှီးတာ ရပ်ပါတော. ၊ မဟုတ်ရင်
၁၅ သိန်းဆင်းကဒ်တွေရောင်းတဲ.ခောတ်ကယနေ.ထိ ဆင်းကဒ်
ရောင်းရငွေ ၊ ဖုံးပြောခ ၇ငွေ(ရ/သုံးစာ၇င်း)ကိုစုံစမ်းရေးကော်မတီဖွဲ.
မယ်၊Companies . တွေ အ၇င်းကြေတာကြာနေပါပြီ
ကမ္ဘောဒီးယား ၊ လာအို၊ Bangladesh ၊ နိုင်ငံ တွေက
ဆင်းကဒ် ဈေးနှုန်း လောက်မှ မရောင်းနိုင်၇င် လေးစားအပ်
သော သမ္မတကြီး ခင်ဗျား ------ ၊ နှုတ်ထွက်လိုက်ပါတော. ၊
ဘာဖြစ်လို.လဲဆို basic qualification ofapresident
မမှီတော.လို.ပါ ။ ကျုပ်ပြောတာ မှန် မမှန် လီကွမ်ယူ ကို
သွားမေးကြည်.ပါ ။ ။ ။